Wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay wargaysyada %
Kooxaha Yurub ayaa wali si wayn ugu jira in ay suuqa kala iibsiga ka raadsadaan ciyaartoyda ay u arkaan in ay kooxahooda xoojin u noqon karaan inta aan la gaarin xili ciyaareedka cusub.
Waxaan halkan idiinku soo ururinay wararkii ugu dambeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidigaha la kala doonayo.
Weeraryahankii hore ee Liverpool Dean Saunders ayaa aaminsan in Ole Gunnar Solskjaer uusan dhameysanin xilli ciyaareedka soo socda oo laga ceyrin doono shaqada tababare. (talkSPORT)
Solskjaer ayaa weli kalsooni ku qaba inay ka dulqaadi karaan deriskooda Manchester City saxiixa daafaca Leicester 26 jirka Harry Maguire oo ay ku doonayaan 75 milyan ginni. (Daily Mail)
Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Juan Mata oo 31 sanno jir ah ayaa iska diiday dalab uga yimid kooxda Shiinaha ee Shanghai SIPG oo uu isbuucii mushahar ahaan ku qaadan lahaa 550 kun ginni isagoo ka doortay inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda Old Trafford ka dhisan. (90Min)
Everton ayaa laga soo diiday dalab 30 milyan euro oo ay ka gudbiyeen weeraryahanka Juventus ee 19 jirka ah Moise Kean. (Tuttosport)
Kooxda Roma ayaa xiiseyneysa daafaca Tottenham Toby Alderweireld, iyadoo qandaraaska 30 jirkaan reer Belgium lagu burburin karo 25 milyan ginni ilaa iyo 26ka bisha July. (Sky Sports)
Tottenham ayaa sarre u qaadeysa doonisteeda xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid 22 jirka Dani Ceballos iyagoo ku doonaya heshiis amaah ah. (Daily Mirror)
Arsenal ayaa u diyaar ah inay ku darto daafacyada Calum Chambers, Carl Jenkinson ama xiddiga khadka dhexe Mohamed Elneny heshiiska ay ku dooneyso xiddiga garabka ka ciyaara ee Crystal palace Wilfried Zaha. Gunners ayaa durababa laga soo diiday dalab 40 milyan ginni oo ay ka gudbiyeen 26 jirkaan. (Daily Mirror)
Manchester City ayaa dooneysa inay ceshato xiddiga khadka dhexe Fabian Delph xagaagan inkastoo wararka xanta ay sheegayaan in 29 jirkaan uu ka tagayo Etihad Stadium. (Metro)
Weeraryahanka Atletico Madrid Diego Costa ayaa diyaar u ah inuu ku laabto Premier League isagoo doonaya inuu heshiis u saxiixo kooxda Everton. (The Sun)
Philippe Coutinho ayaan qeyb ka aheyn qorshaha tababaraha Barcelona Ernersto Valverde ee xilli ciyaareedka soo socda. (Daily Express).
Manchester City ayaa ku soo laabatay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Sporting Lisbon Bruno Fernandes kaasoo u dhow inuu ku biiro Man United, City ayaana wadahadal la yeelatay madaxa maamulka kooxda Portugal oo soo gaaray Manchester. (Correio da Manhã)
Manchester United ayaa dalab 45 milyan ginni ka gudbisay daafaca Nikola Milenkovic oo u ciyaara kooxda Talyaaniga ee Fiorentina, waxayna u arkaan xiddig ay uga maarmaan Harry Maguire haddii Leciester ay ku adkeysato qiimaha sarre ee ay duldhigtay. (Daily Mirror)
Arsenal ayaa dooneysa inay la saxiixato xiddiga garabka ka ciyaara ee Barcelona Malcom oo 22 sanno jir ah iyadoo Everton ay durbaba dalab 31.5 milyan ginni ka gudbisay saxiixa xiddiga reer Brazil. (The Sun)
Inter ayaa sarre u qaaday doonisteeda xiddiga Man United Romelu Lukaku iyadoo agaasimaha kooxda Piero Ausilio uu u duulay London si uu wadahadal u la yeesho madaxa maamulka Man United Ed Woodward. (The Sun)